Ayyaana cuuphaan wal qabatee godinaalee oromiyaa cufa keessatti waraaksi biyyaalessaa fxg itti fufee jira. | QEERROO
Ayyaana cuuphaan wal qabatee godinaalee oromiyaa cufa keessatti waraaksi biyyaalessaa fxg itti fufee jira.
Yakka duguugaa sanyummaa sirni nama nyaattuu wayyaanee uummata oromoo irratti raawwachaa jiru kan nagaa isaan dhorke gootowwan qeerroon Bilisummaa oromoo guutummaa golee oromiyaa cufa keessa jiran ayyaana cuuphaa kan bara 2018 tiin wal qabsiisuun sagalee isaanii dhageessifachuu isaanii daran hammeessanii itti fufuu qeerroon gabaasee jira.Godina shawwaa lixaa magaalaa Amboo fi giincii ,akkasumas magaala walisoo dabalachuun warraaksi biyyaalessaa fxg haala akkaan ho’aa ta’een geggeeffame.
Akkasumas akka Godina shawwaa lixaatti hidhamtoota siyyaasaaf simannaan karaa gootowwan qeerroo magaalaa Amboo fi naannoo isheetiin taasifamee jiraachuunis addeeffame.
Caalmaattimmoo gootowwan qeerroon Bilisummaa oromoo Godina shawwaa lixaa keessaa fi naannoo ishee keessa jiraataan wallee warraaksaa fi dhaadannoo garaagaraa barreeffachuun ayyaana cuuphaa akka kabajachaa jirantu himame.Bifuma wal fakkaatuun godina wallagga lixaa Magaaloota kanneen akka Mandii,Najjoo,Baabboo Gambeel,Ona Qilxu kaarraa fi Magaala Gimbii keessattis ayyaana cuuphaan wal qabatee warraaksi biyyaalessaa fxg bifa garaa garaatiin itti fufee jiraachuu qeerroon gabaase.
Bifuma wal fakkaatuun godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessattis ayyaana cuuphaan wal qabatee fxg daran hammaachuus qeerroon addeessanii jiru.
Godina kana keessatti mootummaan wayyaanee rifaatuu fi sodaa keessa seenuudhaan uummata Nagaan ayyaana cuuphaa kabajachuu bahe irratti reebicha jumlaan raawwatee jiraachuu qeerroon gabaasee jira.
Walumaa galatti Akka godina wallagga lixaa fi bahaattis simannaan hidhamtoota siyyaasaaf taasifamuu fi Qeerroo fi qarreen godinaalee kanneenii ayyaana cuphaa irraatti tokkummaan walitti dhufuun sagalee isaanii dhageessifachaa akka oolantu himame.
Godina Arsii Lixaa fi baalee akkasumas godina Harargee lixaa keessattis keessattis gootowwan qeerroon godinichaa uummata godinichaa waliin tokkoomuun yakka ajjeechaa ,hidhaa fi dararaa mootummaan wayyaanee uummata oromoo irratti yeroo ammaa raawwatamaa jiru balaaleffatan.
Hidhamtoota siyyaasaa hiikamaniifis simannaan baga nagaan hiikamtanii akka godina kana keessatti taasifames maddeen oduu qeerroo godinaalee oromiyaa tokko tokkorraa.